Nke a bụ ihe kpatara na ị ga-aga ozodimgba trekking ugbu a
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa na Uganda » Nke a bụ ihe kpatara na ị ga-aga ozodimgba trekking ugbu a
Njem njem • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • omenala • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • Tourism • Okwu Nlegharị Anya • Mmelite nke Njem njem • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ na -agbasa na Uganda • Akụkọ dị iche iche
Gorilla trekking na Bwindi
Gorilla Trekking bụ otu n'ime anụ ọhịa kachasị mma n'ụwa niile.
Ndị chọrọ ịga njem na-eme atụmatụ njem na Uganda, bụ ebe kachasị mma ịga hụ ozodimgba ugwu na-atọ ụtọ n'ọhịa.
A na - ahụ ugwu ozodimgba ndị dịpụrụ adịpụ na ebe abụọ dị iche iche - Bwindi Impenetrable Forest na Uganda na Virunga Mountains nakwa Uganda yana Rwanda, na Democratic Republic of Congo.
Oge ịhụ ugwu ozodimgba dị nso na 98 pasent na nke ọ bụla nke ogige ozodimgba abụọ.
Ikiri nnukwu apes na ebe obibi ha na-ebuli elu ochicho nke ndi njem. Mgbe ole Ogige Ngwurugwu Bwindi Enweghị Ncheta Obodo edepụtara dị ka otu n'ime ebe njem njem ise kachasị mma n'ụwa niile site na CNN na 2019, ọtụtụ chere na ọ bụ nnukwu. Ma na obodo nke onyinye site na okike, ozodimgba trekk bu nani nkpuru mmiri.
Site na njem ndị njem na-etolite n'Africa, ndị ọzọ na-achọ ịga njem na-eme atụmatụ njem ha na Uganda, bụ ebe kachasị mma iji zute ozodimgba ugwu na-akpali akpali n'ọhịa. Site na ụgbọ elu Uganda na-amalite azụmaahịa, ọ dị mfe ịga Uganda, mba nke nwere ọtụtụ ihe ịtụnanya na-eto ma hụ.
Ọ bụrụ n’ịtụlebeghị atụmatụ ezumike maka ezumike ị ga-ahụ ugwu ozodimgba, nke a bụ ihe kpatara ị ga-eji bido ịhazi atụmatụ maka safari ozodimgba ọzọ gị.